Archive du 20190716
Fanoherana ny hosoka sy hala-bato Raikitra ny fanambaran-kery lehibe
Fehin-kevitra lehibe miisa 7 miendrika fitakiana no mamintina ny famelabelarana narahina adihevitra lehibe tetsy amin’ny Hotely Carlton omaly alatsinainy 15 jolay 2019, izay nampisalorana ny anarana hoe :
Pastera Edouard Tsarahame (RMTF) “Tokony hanana ny fahefany manokana ny Ben’ny tanàna”
Tsy mipetraka amin’ny tokony ho izy ny fahefan’ny Ben’ny tanàna, kanefa tokony hanana ny fahefany manokana izy raha ovana ny lalàmpanorenana.
Demokrasia eto Madagasikara Laharana faha-95 maneran-tany
Nivoaka ny tatitra nataon`ny Economist Intelligence Unit (EIU) tao anatin`ny HCDED ny volana mey lasa teo mahakasika ny demokrasia ka laharana faha-95 amin`ny firenena 165 maneran-tany i Madagasikara.
Depiote Alain Ratsimbazafy “Hamafisina ny fiaraha-miasa eo amin’ny depiote sy ny Ben’ny tanàna”
Nitondra ny heviny mikasika ny fiaraha-miasa eo amin’ny solombavambahoaka sy ny Ben’ny tanàna, ny depute voafidy tao Atsimodrano Alain Ratsimbazafy voafidy tamin’ny antoko Tiko i Madagasika na Tim.
Tontolo politika Hisy fifandanjan-kery amin`izay
Miandry ny fampiharana ny didim-panjakana ho an`ny fanoherana isika mba hisian`ny fifandanjan-kery eo amin`ny tontolo politika ka tsy tokony hisy intsony ny sakana amin`ny demokrasia eto Madagasikara.
Governemanta Minisitra maro hoesorina…
Enim-bolana afaka 3 andro no nitondran’ny filoha Rajoelina ny firenena.
TOETR’ANDRO Hihamafy ny fitsokan’ny rivotra amin’ity herinandro ity
Ny Alizay antonony no mandrafitra ny toetr’andro eto Madagasikara amin’ity herinandro ity, raha araka ny fanadihadiana natao teo anivon’ny sampana mpamantatra ny toetr’andro etsy Ampandrianomby.
Fiangonana Anglikanina Hanatanteraka ny Synoda ny diosezin’Antananarivo
Etsy amin’ny Ivontoerana Fiofanana sy Lalao Anglikanina (IFLA) Iavoambony Lazaina no hanatanterahana ny synoda lehibe faha-15 ny diosezin’Antananarivo amin’ny 30 jolay hatramin’ny 04 aogositra.
Andravoahangy Zaza iray matin’ny fahatairana sy ny rano mangotraka
Maty vokatry ny fahatairana ny zazavavikely sahabo iray taona mahery. Nandeha nijery fitsenana ny ekipam-pirenena Barea ireo ray aman-dreniny, ny sabotsy tolakandro teo.
Fifehezana ny vory vahoaka Sahirana ny mpitandro filaminana
Isaky ny misy havoriam-bahoaka, saika ahitana ratra hatrany. Tsy fahita amin’ireo firenena mandroso ny olom-pirenena entanim-po ka miafara amin’ny fahavoazana.
Lozam-pifamoivoizana tany Betafo Nijery fotsiny ireo naratra ny mpitondra fiara maro nandalo
Efa nihen-danja ny fanajana ny lalàna mahakasika ny fanavotana ireo ambavahaonan’ny fahafatesana.